Rattan oriọna, kpara oriọna oriọna, achara oriọna - Xinsanxing Lighting
Na-eduga Manufacturer nke Rattan / achara Oriọna Na China
Uwe akwa nke Rattan, nke malitere na China ihe karịrị otu puku afọ gara aga, nwere echiche ndị mmadụ nwere n'ụba. Ruo ogologo oge, ọkụ XSX na-achọ mgbe nile iji achara, rattan, wicker na ihe ndị ọzọ sitere n'okike iji mee oriọna site na ịkwa aka aka. zuru oke Nchikota nkasi obi na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi, bara uru, nka na otu, weta ulo nke oge a na ime obodo okike. Anyị mmepụta isi dị na Guangxi, China, ebe akpa knit nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke ihe nketa, na e nwere imerime ọkà weaving nketa omenkà. usoro na nhazi nke oge a na-egosipụta obi ike ịbịaru okike nso. Na-eji oriọna na rattan achara me aka nka nke nwere ihe di nkpa ......
Ntanetị ụlọ ntanetị bụ ihe eji eme akwa na ihe eji eme akpụkpọ ahụ na isi nke rattan. Rattan bụ ụdị osisi vaịn nwere ọdịdị siri ike na oke ogologo; akpụkpọ ahụ ya dị larịị, dịkwa mma n’aka, dị mma na-agbanwe agbanwe, ma yie ka Ọ bụghị iberibe elu, a na-akpọ ya slats slab, nke bụ ezigbo ihe eji eme akwa. Oriọna ndị dị kwa ụbọchị dịka oriọna okpokoro, oriọna rattan, chataneli, wdg. Nke XINSANXING oriọna mara mma ọfụma, dị iche iche ma na-adịgide adịgide, ndị ahịa na-ahụkwa ya n'anya.
A na-ejikarị Rattans mee oriọna, ma ọ bụrụ na ịkpụ ya na ngalaba, a pụrụ iji rattan dị ka osisi iji mee oriọna. .Rattan bụ ezigbo ihe onwunwe, ọ kachasị n'ihi na ọ dị fechaa, na-adịgide adịgide, yana, na oke ụfọdụ, na-agbanwe ma dabara adaba maka oriọna.
Achara siri ike ma na-agbanwe agbanwe karịa ọtụtụ osisi, ebe ọ nwere ogologo eriri. Ọ nwere ike itolita ruo otu mita kwa ụbọchị ma mepụta ikuku oxygen okpukpu abụọ ma e jiri ya tụnyere ụdị osisi ndị ọzọ. Achara nke XINSANXING na-eji dị njikere maka owuwe ihe ubi mgbe afọ 4-6 gasịrị. Achara bụ ahịhịa, ọ bụghị osisi, ọ chọghịkwa ịkụgharị. Ọ bụghị naanị na ọ na-eto dị ka ahịhịa, ma na-agbasa dị ka ahịhịa.
Featured Rattan Oriọna
Weta ọpụrụiche dị n’ụsọ osimiri wee chọọ n’ụlọ gị mma ya na oriọna Weave Rattan nke sitere na XINSANXING. Igwe oriọna ndị a bụ mgbakwunye na-enwu gbaa ebe ọ bụla o metụrụ ala, site na paseeji isi na palọ gị ma ọ bụ na-agụ akwụkwọ.
Rattan nghọta ìhè fixtures, Southeast Asia Ho ...
Kpara pendant oriọna, Southeast Asia ahaziri ...
Rattan obi ụtọ pendant ìhè, Southeast Asia handma ...
Black rattan pendant ìhè, Simple rattan nwa ...
Large rattan pendant ìhè, New style rattan wov ...
Rattan n'uko ìhè, Hazie oge a rattan wi ...
Huizhou Xinsanxing Lighting Co., Ltd. emi odude ke Huizhou City, Guangdong Province, China. Tọrọ ntọala na 2007, ọ bụ ụlọ ọrụ mgbakọ na-arụ ọrụ na nhazi na ịmịpụtachandeliers rattan,rattan n'ala oriọna,oriọna tabletan oriọna, achara n'ala oriọna,achara ìhè pendant,achara okpokoro oriọna. Nwee otu R&D zuru ezu na sistemụ njikwa njikwa sayensị. Na resin, ígwè, achara na rattan, osisi, ọkpọkọ mmiri na ihe ndị ọzọ e kere eke dị ka akụrụngwa, site na nzukọ ahaziri iche na nhazi nhazi, ọhụhụ nke oge a, ochie America, nka okike na ụdị dị iche iche nke oriọna na oriọna ndị na-emepụta ka emepụtara iji wee zute ọtụtụ. ahịa choro. A na-ebupụ ngwaahịa ndị a na Europe, America, Middle East, Southeast Asia, South Africa na mba ndị ọzọ na mpaghara, ma merie nkwado na nkwenye nke ndị ahịa esenidụt na akwụkwọ akụkọ na ụdị dịgasị iche iche, ọnụ ahịa asọmpi na ọrụ magburu onwe ya.
Omenala, Suppliers, N'ogbe Rattan Oriọna Products
Chọrọ enyemaka ọzọ iji chọta oriọna achara kachasị ewu ewu? Ga - ahụ oriọna achara kachasị mma na XINSANXING! Site n'ọtụtụ dị iche iche nke oriọna achara dị mma na ndị nwere ọnụ ala, XINSANXING ga - enyere gị aka ịchọta oriọna bamboo kachasị mma, n'agbanyeghị agbanyeghị ego gị. , anyị na-N'ogbe, soplaya na Nlụpụta ọzọ rattan ìhè ngwaahịa, n'ihi na ihe atụ, nkata Pendant Light, Rattan Ft Oriọna, Rattan Isiokwu ìhè, wdg gosi m ihe ị na-eche, Kpọtụrụ anyị ugbu a!
Achara nghọta eletrik, Creative home ligh ...
Achara pendant ọkụ, Southeast Asia style bam ...
Achara n'uko ìhè fixtures, Southeast Asia Ho ...
Achara ọkụ pendant, Nordic oge a achara wo ...
Achara ìhè pendant, Creative àgwà chand ...
Achara pendant oriọna, Simple achara art oriọna crea ...
Achara nghọta, achara kpara okike hou ...
Achara, achara nke okpu | X ...
Lelee blọọgụ anyị maka usoro ọhụụ, ndụmọdụ, ndụmọdụ na mmụọ nsọ.
Nhazi nke mkpịsị aka kpuchiri oriọna ...
Cany na-eme oriọna ka ọ rụọ ọrụ nke ọrụ bụ na anyị maara nke ọma, n'oge enweghị ikuku oyi, ọtụtụ cany na-eme ngwongwo iji mee ka oge ọkọchị niile dị ka ihe dị jụụ na r ...
Kpa ákwà nke oriọna | XINSA ...
Achara rattan oriọna na-eme ọrụ nke na ya eke ihe onwunwe bụ qualitative ihe onwunwe, aga were were na akara, na n'afọ iri na ụma na braids merie ihu ọma nke ụwa afresh.Whether n'ụlọ, ma ọ bụ na hotels, c ...
Mbido nke ịkpa akwa | XINSANXING
Achara oriọna achara nwere ụdị dị iche iche, mana ị maara ịkpa akwa nke oriọna achara? Differentzọ ịkpa akwa dị iche iche nke ịkpa akwa a dịkwa iche iche, a na-emepụta ụdị ịkpa akwa dị ka ne ...
Ngwaahịa a nwere asambodo nyocha nke ụlọ ọrụ ahụ dị elu, iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị elu na ọrụ dị elu.